Isi mmalite HS-3 ekweisi nyocha, ekweisi gị ka ị ghara ịkwụsị | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Nyocha
Anyị na-anwale music metụtara Ngwa. Ngwa ndị na-enyere anyị aka inweta ọtụtụ n'ime ekwentị anyị. Taa, anyị na-egosi gị ekweisi anyị bụ ndị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ egwu mgbe anyị na-eme egwuregwunke Ezigbo HS-3.
Dịka anyị nwere ike ịhụ n'ahịa, enwere ugbu a ọtụtụ narị ụdị ekweisi. Ndị na-enye Ezi Wiereles Sound wireless teknụzụ kwụpụtara maka ịbụ nke kachasị ọhụụ. Ma dị ka mkpa nke onye ọrụ ọ bụla, ekweisi ndị a nwere ike ịbụ ihe ekwesighi.
1 Origem HS-3, egwu gi na anoro gi
2 Ezubere iji kwado ọrụ anyị
3 Da mma dị ịtụnanya
4 Origem HS-3 Nkọwapụta Isiokwu
5 Uru na ọghọm nke Origem HS-3
Origem HS-3, egwu gi na anoro gi
Dị ka anyị na-ekwu, dị ka ụdị egwuregwu na ị na-eme. Ọzọkwa dika ike nke anyi ji eme ya, umu aka Ekweisi TWS nwere ike gbanwee iru ala. Ọ bụghị n'ihi ibu ma ọ bụ arụmọrụ ahụ. Ma ee nwere ike isi na nti wepu ya wee daa ala. Gbaji, i furu ụzọ ma mecha mee ka akụkọ anyị daa.
Na Ezigbo HS-3 ị ga - eche naanị maka iti akara kacha mma gị. Ọ bụ ya mere eji ezi uche chepụta ka ha ghara ịda ma ọ bụ tọpụ. Na mgbakwunye na anatomical udi gị ekweisi, na intraural usoro nke ahụ dabara nke ọma. HS-3 Ha nwere ihe mmekorita ozo ka ha ghara ida ma obu anyi nwere ike idafu har.
La Mbido mbinye aka amuru na obughi mgbe gara aga, n’afọ 2.014. Onye kere ya ndị nwere ụda na teknụzụ nwere ahụmahụ. Na otu ndi otu ahaziri egwu nwere egwu. Isi ebumnobi ha bụ inye ahụmịhe kachasị mma na ọnụahịa ọnụ. Ma na-elegharaghị atụmatụ mara mma na nke ọhụụ anya.
O doro anya na Origem HS-3 adịghị aga hụrụ ya. Ha nwere a anya-adọrọ imewe mgbe mara mma. Nhọrọ nke oji na uhie na-aga nke ọma ka ha na-eme ka ha pụta ìhè. Echiche nke na ha ka nwere eriri nwere ike ime ka ha yie ka ha agaghị adịte aka. Ma o doro anya na enwere ndị na-ahọrọ bọtịnụ na-abụghị ekweisi iji megharịa ha n'ụzọ dị mfe karị.
Buyzụta Origem HS-3 ebe a na Amazon
Ezubere iji kwado ọrụ anyị
Na ileba anya mbu ị ga - ahụ na ndị na - emepụta Origem chọrọ HS-3 sean otu nhọrọ maka ndị hụrụ egwuregwu n'èzí n'anya. Anyị na-ahụ otú ekweisi nwere a ergonomic design nke dabara adaba na nti. Na a mfe ibu n'ihi otú ìhè si dị.
Ekwentị nwere iche iche na mpe mpe akwa nha iji hụ na a zuru okè kwesịrị ekwesị. Na n'elu ihe niile arụmọrụ ụda na ekweisi ndị a nwere ike ịnye nwere ike ịnụ ụtọ ya. Nkasi obi dị mkpa mgbe anyị ga-eji ha maka egwuregwu, mana mara na anyị agaghị atụfu ha.
Na ná mpụta nke ekwentị ahụ na-ahụ gburugburu dị dara na etiti nke akara aka mbinye aka. Dị n'elu anyị na-ahụ Nkwado nke dị n'elu ntị. una isiike mpempe plasticized waya na adụ padding na mpaghara na-adabere na azụ ntị. Nke bukwa rmgbanwe maka ngụkọta idozi na ezigbo ntụsara ahụ.
Na ekweisi anyị agaghị ahụ enweghị njikwa aka ma ọ bụ bọtịnụ. Maka nke a, ndị Origem HS-3 nwere a onwe ha ahụ igodo dị mfe dị ka ọ bara uru. Naanị mkpọchi atọ, gbanyụọ ma gbanyụọ, nke nwekwara ike ịza ma ọ bụ kwụnye oku. Na bọtịnụ abụọ ọzọ maka njikwa olu nke ejiri pịa abụọ na-eme ka egwu ahụ gaa n'ihu ma ọ bụ azụ.
Ọ dịkwa na ya na mpaghara bọtịnụ igwe okwu ikwu okwu na ekwentị. N'otu akụkụ ya kwa, njikọ ọdụ ụgbọ mmiri maka "ngwa ngwa ụgwọ" Nchaji. Ọ bụ njikọ Micro USB nke anyị ga- jikọọ eriri maka naanị 30 nkeji Iji na-enwe ruo awa 6 nke egwu n’akwụsịghị akwụsị.
El USB na agba uhie Ọ na-egosi ubé thicker karịa nke ot ekweisi. Ọ na-emesi anyị obi ike a zuru okè mmekọrịta nke ụda nke ma ọwa Enweghị ọnwụ nke ụda ma ọ bụ njikọ na ekweisi ọ bụla. Ma ọ bụ n'azụ olu ka ọ ghara inwe nsogbu ọ bụla ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-egwu egwuregwu. Ha bụ ekweisi ị na-achọ? Nwere ike ịzụta ugbu a na ịpị njikọ a na Origem HS-3 na Amazon.
Da mma dị ịtụnanya
Ọ bụ ezie na ọdịdị ahụ dị mkpa nke ukwuu na ngwaọrụ ọ bụla, ụda dị mkpa na ekweisi. Ma ebe ọ bụ na ọ bụ ekweisi nwere nghazi doro anya maka ndị na-eme egwuregwu, enwere ụfọdụ ihe dị mkpa ị ga-ebu n'uche. Iburu n'uche na nke ahụ tupu oge eruo mgbochi na nchekwa agaghị enwe nsogbu.
Anyị nwere mmasị na gị ike olu larịị. Anyị na-anwale mgbe ụfọdụ ekweisi nke olu ya kachasị elu. Nke a ga - adị mkpa karịa mgbe ha nwere ekweisi maka iji arụ ọrụ n’èzí. Ya mere, na mgbakwunye na inwe a ezigbo uko nyere usoro intraral ya, ha na-ada ụda n’olu dara ụda nke na anyị nwere ike ịnụ naanị egwu anyị.
Ma egwu anaghị ada ụda n’olu dara ụda. O juru anyị anya ogo dị mma anyị nwere ike ịdabere na Origem HS-3. Bass na-enwe mmetụta nke ọma. Na treble na-ada na idoanya na ogo anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ ndị dị oke ọnụ karị. Anyị na-achọ itinye ha nke kachasị na-enweghị mmetụta ọ bụla. Na nkenke, otu akụkụ nke ụda nke HS-3 nwetara ezigbo ederede, ma ebe a ị nwere ike ịzụta ha ugbua na Amazon
Origlọ ọrụ Origem gosipụtara igbe ya na HS-3 maka ịbụ lIgwe okwu izizi iji gosipụta teknụzụ HDR ọhụrụ (Ọdịdị Dị Elu Dị Elu). A algọridim ike dynamically ịgbanwe ukpụhọde ụda nke dị iche iche frequencies na-akpaghị aka. N'ụzọ nke a ọ na-enye a nanị zuru okè stereo ụda ahụmahụ.
Origem HS-3 Nkọwapụta Isiokwu
Usoro ntị Intraral
Njikọ 5.0 Bluetooth
Ogologo nkwado ruo mita iri
Carga Micro USB n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa
Oge nfe Nkeji 30
Onwe ya Awa 6
Njikwa 3 bọtịnụ anụ ahụ
Akụkụ X x 18 10 5 cm
Ogologo eriri 70 cm
Ibu ibu 20 g
Ahịa 94.99 €
Linkzụta njikọ Ezigbo HS-3
Uru na ọghọm nke Origem HS-3
Zuru okè maka ịgba ọsọ ma ọ bụ na-egwu egwuregwu n'èzí n'echeghị na ha ga-ada, gbajie ma ọ bụ tufuo.
Ogo nyere site akwụkwọ akụkọ algọridim nke HDR ụda.
Ngwa ngwa ngwa n’ime nanị nkeji 30, anyị ga-enwe egwu elekere isii nke nkwusi na nkwusi.
Mgbapu na mmiri na-eguzogide ekele IPX5 asambodo.
Ezubere maka egwuregwu n'èzí
Nwee cableỌ bụ ezie na ọ nọ n'azụ olu ọ dị ka ihe mgbe ochie.
Enweghị njikwa aka na ekweisi onwe ya.
El ego karịrị echiche ma ọ bụghị asọmpi.
USB pụọ n'ụdị
Enweghị njikwa aka
Nke karịrị ego a tụrụ anya ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Isi mmalite HS-3 Isi nyocha
Black Shark 2 Pro: Xiaomi ike kacha egwu egwuregwu